Tag: hevitra yelp | Martech Zone
Tag: hevitra yelp
Famerenana nangatahana na karamaina dia famerenam-bola
Alarobia, Jolay 20, 2016 Alarobia, Jolay 20, 2016 Douglas Karr
Nanana adihevitra mafonja izahay tamin'ny hetsika fitarihana isam-paritra momba ny fanangonana fanamarihana avy amin'ny orinasa sy ny mpanjifa amin'ny Internet. Ny ankamaroan'ny fifanakalozan-kevitra dia manodidina ny hevitra nandoavam-bola na valisoa ho an'ny mpanjifa. Tsy mpisolovava aho, koa atoro anao hiresaka amin'ny anao alohan'ny fihainoana ahy. Tsotra ny fijoroako amin'ity… Aza mandoa na manome valiny. Mety tsy mitovy hevitra amiko ianao, fa tahaka ny indostrian'ny fikarohana voajanahary dia nopetahana tamin'ny laharana diso tafahoatra,
Vao tsy ela akory izay dia nanao resadresaka nahafinaritra izahay niaraka tamin'i Daniel Lemin, mpanoratra ny ManipuRATED: Ahoana no ahafahan'ny tompona orinasa miady amin'ny fanontana an-tserasera sy hevitra momba ny hosoka. Niresaka ny maha-zava-dehibe ny fisamborana hevitra izy mba hananana tsikera vaovao sy hiadiana amin'ny hevitra ratsy mety hipoitra indraindray. Misy fotoana tsara kokoa ahazoana famerenana tsara ve fa tsy aorian'ny fialan'ny mpanjifa afa-po amin'ny orinasanao? Mety tsy izany - ka maninona no tsy
MomentFeed: Vahaolana momba ny varotra finday ho an'ny fikarohana sy sosialy
Sabotsy, Desambra 19, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Raha mpivarotra amina tranom-pisakafoanana ianao, na mihoatra ny franchise, na ny rojom-barotra, dia tsy azonao atao ny miasa manerana ny tsena sy ny salantsalany hampiroborobo ny toerana tsirairay raha tsy misy karazana rafitra. Ny marikao dia tsy hita maso amin'ny karoka eo an-toerana, jamba amin'ny fandraisana anjaran'ny mpanjifa eo an-toerana, tsy manana fitaovana hamoronana doka mifandraika amin'ny eo an-toerana, ary matetika izy ireo dia tsy mitantana fisian'ny media sosialy feno. Amboary ny ezaka amin'ny fanovana fihetsika lehibe ataon'ny mpanjifa: 80%
Doka amin'ny Yelp?
Sabotsy, Martsa 23, 2013 Sabotsy, Martsa 23, 2013 Douglas Karr
Vao haingana izahay no nanampy ny mpiasan'ny birao (eny - tena manana izahay!) Manapa-kevitra raha fampiasam-bola tsara ny fividianana dokam-barotra amin'ny Yelp hampiroborobo ny spaony eto Indianapolis, Quiescence Experience. I Monique dia efa nahita fifamoivoizana an-tongotra avy tamin'ny fisiany tamina Yelp, ka angamba ny fanaovana doka amin'ny Yelp dia mety hiteraka bebe kokoa aza. Rehefa miresaka amin'ny solontenan'ny dokam-barotra dia matanjaka be ny fonosana dokam-barotra. Voalohany, hahazo doka natokana i Monique